irayisi encinci yokuthengisa iyathengiswa,intengo yematshini yokucheba irayisi encinci eIndiya
oomatshini abancinci bokugaya irayisi benzelwe ukubonelela ngesivuno esiphezulu kunye nengeniso kumatshini wokugaya irayisi. Izisombululo zethu zokuphelisa irayisi zinciphisa inkcitho kwinkqubo, ukuhambisa iimfuno nokugcina imigangatho yococeko ekusebenzeni kokutya. Inkampani yethu inikezela ngezisombululo ezilungiselelwe iiprojekthi ukusuka kwinqanaba lomxholo ukuya kwinqanaba lemveliso, ukugcina iindleko zikwamanqanaba aphezulu, Ukuqinisekisa ukuhanjiswa ngexesha.
Siyila, Yenza kwaye unikeze uluhlu olupheleleyo lwamatshini amancinci wokugaya irayisi kubandakanya ukucoca, ukuqunjelwa, mhlophe, ipoli, Ukuhlela, Ukuhlela kunye nokupakisha oomatshini ukufezekisa iimfuno zokwenza irayisi. Inkqubo yethu yokugaya irayisi encinci inceda ii-millies zerayisi ukuphucula ukuvelisa kunye nokunciphisa iindleko zokusebenza. Indawo yokuphucula ubugcisa, ukuhambisa ngokukhawuleza kunye neenkonzo ezihle kakhulu emva kwentengiso zisincedile ukuba sibe ngumdlali ophambili kushishino lokugaya irayisi.
lo matshini welayisi mini wokupheka uluhlobo olutsha umatshini wokugaya irayisi omncinci, yenzelwe yonke usapho ukuba itye isempilweni kwaye iqinisekisiwe irayisi. Injalo lincinci ivolumu ke kulula ukusuka kwindawo ethile ukuya kwenye kwaye iyathwala. Into ebaluleke kakhulu kukuba lo matshini wokugaya irayisi ulungele abathengi ukuba bawusebenzise ekhaya, ngomsebenzi wokuzenzekelayo, inokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zabathengi ekhaya besebenzisa.Qhagamshela kuphela kumandla kwaye ucinezele iqhosha eliza kusebenza. Uyayibona ke indlela ekulula ngayo ukuyisebenzisa. Ngaphandle koko, Lo matshini usebenza ngokwenyani.
Ungayisebenzisa ukufumana irayisi emdaka kunye nerayisi emhlophe. Ke oku mini yezixhobo zangokuhlwa zerayisi ithandwa kakhulu ngoku, ngakumbi kumazwe afana ne-USA, Khanada, Thayilendi, Singapho, China, ENigeria njl
Iingcebiso ngoKhuseleko ukuze usebenzise iMini Rice Mill
1. I-voltage yomshini wombane wesigaba esinye. Nceda uqinisekise phambi kokuba uyisebenzise.
2. Ngaphambi kokuba usebenzise umatshini omncinci welayisi, Nceda ujonge zonke iplagi, Unxibelelwano lombane.
3. Ukuthintela ukuvumela umatshini wokugaya irayisi ukuba usetyenzwe kumaqondo aphezulu, Iqondo lobushushu elijikeleze umatshini olapha ngezantsi ama-40 ℃ uninzi.
4. I-paddy okanye irayisi eyalungiswa ngomatshini omncinci welayisi kufuneka ifikelele kumgangatho wokhuseleko kwaye usempilweni. Kwaye nceda ukhethe kwaye uphose izinto ezinzima, njengelitye elincinci, Isinyithi ukunqanda ukonakalisa umatshini.
5. Ngexesha lokusebenza komatshini, ukuba umthwalo mkhulu okanye ubhliwe, ndicela unqume kwaye ucoce izinto kwigumbi lokugaya irayisi, emva koko mayiphinde isebenze.
6. Ngexesha lokusebenza, xa i-tletse igcwele isibini kwisithathu sebhokisi, Nceda ucoce ngexesha elifanelekileyo uphephe ukuphazamisa ukusebenza komatshini.
7. Ukuba umatshini omncinci wokugaya irayisi uyasebenza, nceda ungayisusi.
8. Ngaphambi komatshini wokugaya iilayisi omncinci uyeke ukusebenza ngokupheleleyo, Nceda ungacoci kwaye ugcine.
9. Emva komatshini wokugaya iilayisi omncinci ugqibile ukugaya irayisi, idinga imizuzu eliqela eqhubeka nokujikeleza, ke ukuba yonke irayisi iyaphuma, emva koko unokuvala umatshini.
Nxibelelana nathi Ngomatshini omncinci wokugaya irayisi